Aso Jehovah Adasefo Yɛ Zionfo? | FAQ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chuvash Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Faroese Finnish French Ga (Nkran Kasa) Galician German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Kabiye Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mapudungun Mauritian Creole Maya Mende Mfantse Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ngangela Norwegian Nzema Oromo Ossetian Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zulu
Aso Jehovah Adasefo Yɛ Zionfo?
Oho, wɔnnyɛ Zionfo. Jehovah Adasefo yɛ Christianfo a wɔdze hɔn gyedzi ahorow gyina Kyerɛwnsɛm no do. Aber a nyamesom ekuw ahorow bi kyerɛkyerɛ dɛ Jewfo a wɔroboaboa hɔn ano wɔ Palestine no fa Kyerɛwnsɛm mu nkɔnhyɛ ho no, Jehovah Adasefo nngye nsusũi yi nnto mu. Jehovah Adasefo nngye nndzi dɛ wɔahyɛ dɛm amanyɛkuw pɔtsẽe yi ho nkɔm wɔ Kyerɛwnsɛm no mu. Nokwasɛm nye yi, Kyerɛwnsɛm no nnkã nyimpa aban, ebusuakuw anaa nkorɔfo bi ho asɛm dɛ woye sen afofor. Jehovah Adasefo hɔn magazine a wɔato dzin Ɔweɔn-Aban no akã no kofee dɛ: “Yennyi Kyerɛwnsɛm mu ngyinado biara a ɔfoa Zion amanyɛkuw no do.”
Encyclopædia Britannica no kyerɛkyerɛ Zionsom mu dɛ ɔyɛ “Jewfo amanyɛkuw bi a no botae nye dɛ ɔbɛhyehyɛ na wɔaaboa Jewfo ahenkurow a ɔwɔ Palestine no.” N’ase fi nyamesom nye amanyɛsɛm mu. Jehovah Adasefo mmbɔ Zionsom ho dawur dɛ nyamesom nkyerɛkyerɛ a wɔgye to mu, na wonngyina ɔfã biara wɔ Zionfo amansɛm mu.
Jehovah Adasefo ahyehyɛdze no yɛ nyamesom ahyehyɛdze nkotoo, na ɔnntaa amanyɛkuw biara ekyir, a Zionsom so kã ho. Wɔayɛ ɔfã biara a Jehovah Adasefo nngyina wɔ amansɛm mu no ho kyerɛwtohɔ pefee, na wɔ aman ahorow bi do no, Adasefo no afa ɔsoɛrtsia akɛse mu mbom sen dɛ wobegyina ɔfã bi. Yɛgye dzi paa dɛ Nyankopɔn no sor Ahendzi no nkotsẽe na obotum dze asomdwee a ɔtsena hɔ daa abrɛ asaase yi; nyimpa aban anaa amanyɛkuw biara nnkotum edzi iyi ho dwuma.
Ɔmmfa ho beebi a Jehovah Adasefo tse biara no, hɔn som mu gyedzi ahorow no mu ngyinadosɛm tsitsir nye dɛ wɔbɛyɛ setsie ama aban ahorow no mbra ahorow no. Wɔnntsew etũa nntsia aban no tumdzi ahorow no, na wɔmmfa hɔnho nnhyɛ basabasayɛ anaa akodzi biara mu.
Aso Jehovah Adasefo Tsia Ɔsom Afofor?